Barlamaanka Siiriya oo aqoonsaday xasuuq la sheegay inay gaysatey dawladii cusmaaniyiinta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Barlamaanka Siiriya oo aqoonsaday xasuuq la sheegay inay gaysatey dawladii cusmaaniyiinta
Barlamaanka dalkaasi Siiriya ayaa aqoonsaday xasuuq la sheegay inay gaysatey dawladii Cusmaaniyiinta ee ka talin jirte inta badan dalalka Muslimiinta inta ayna burburin dagaalkii koowaad ee aduunka. Xasuuqan ayaa la sheegay in lagula kacay dadka Armiiniyinta sida la sheego,
Haddaba maxaa xilligan keenay ayaad is weydiin kartaa ayadoo Siiriya noqonayso dalkii ugu horeeyay ee Muslima ee aqoonsada xasuuqaas la sheego.
Waa ta koowaada dagaalka laba wajiile Dayib Edruqaan ka wado Siiriya iyo Liibiya ayaa Siiiriya ku qasabtey inay aqoonsato xasuuqaas inta badan ay sheegaan gaaladu si ay ugu xumeeyaan dawladii Cusmaaniyiinta.
Dawlada Cusmaaniyiinta ayaa burburtey kadib markii ay la safteen Jarmalka dagaalkii koowaad ee aduunka sidaasna halhal looga qabsaday wadamadii dunida Islaamka ee hoostagi jirey sida waxa hadda loogu yeero Sucuudiga.
Aqoonsigan ayaa yimi kadib markii laba wajiile Dayib Erduqaan oo ciidankiisa u soo direy gobol ay ka buuxaan argagixisada uu taageero ee Daacish iyo akhwaan muslimiin.
Argagixisadan ayaa lagu soo aruuriyay gobolka Idlib markii looga adkaadey goboladii u dhawaa. Siiriya ayaa rabta inay dalkeeda ka sifeyso argagixisada ay taageeraan Maraykanka, Yuhuuda, Sucuudiga iyo Turkiga oo dhinaca,
Dayib Erduqaan ayaa laba wadan oo Muslima ka wada qas asagoo sheeganaya inuu yahay hogaamiyaha ururka argagixisada ah ee akhwaan Muslimiin.